सांसदका लिखित र मौखिक प्रश्नको जवाफ किन दिँदैन सरकार ? - खबरमञ्च खबरमञ्च
२८ पुस, खबरमञ्च, at 7:50 AM
By खबर मञ्च / January 12, 2019 / Comments Off on सांसदका लिखित र मौखिक प्रश्नको जवाफ किन दिँदैन सरकार ?
काठमाडौँ । सांसदहरूले सोध्ने गरेका लिखित तथा मौखिक प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको छ । संसद् नियमावलीअनुसार सांसदले सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्न सक्छन् ।
नियमावलीअनुसार प्रश्न गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद्मै आवाज उठाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि सचिवालय यतिवेला प्रश्न संकलन गर्ने र सरकारलाई पठाउने काममा व्यस्त देखिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
Last Modified: January 12, 2019 @ 7:50 am
त्रिविको जग्गामा प्राध्यापक र कर्मचारीको रजाइँः पम्पदेखि भट्टीसमेत संचालन